Real Estate Listings: » Residential homes » Flats » GB » Essex » Colchester » I-2 Flat yokulala kwiRente eColchester, Essex1
United Kingdom, Essex, Colchester, Co7 0ds
Ikhowudi yeposi: Co7 0ds
Iimbonakalo: Unfurnished, 2 bedrooms, First Floor Maisonette Flat, Lounge/diner, Kitchen, Bathroom
Igumbi lokulala lokuqala elingafakwanga kumgangatho wokuqala we-cinema yedolophu yaseBrightlingsea enikezela ukhetho oluhle lwezinto ezilapha ekhaya, iivenkile ezinokuthengiswa kunye neevenkile zokutyela. Iflethi ifikelelwa ngesitepsi somthi esigubungele umnyango wokungena. Indawo yokuhlala iquka: Iholo lokungena, ikhitshi ene-oveni, ifriji / ifriji kunye nendawo kunye nemibhobho yokuhlamba umatshini. Igumbi lokutyela / isidlo sangokuhlwa, iholo yangaphakathi eneholo, igumbi elihle lokuhlambela elinomhlophe Igumbi lokulala elikhulu elinamagumbi amabini kunye negumbi elinye. Ipropathi ishushu kubushushu bokugcina. Akukho ndawo yokupaka.Izithintelo: Akukho zilwanyana zasekhaya okanye abatshayayo. Ibango lezibonelelo zokufumana izindlu ziya kudinga isiqinisekiso. Oku kungabantu abahlukeneyo kwaye nokonga kuya kuthathelwa ingqalelo.Ibhunga leRhafu leBhunga: Iyafumaneka ukususela nge-14 ka-Epreli ngo-2020, ngokuxhomekeke kwizalathiso ezicacisiweyoImibuzo Qaphela ukuba ufuna ukuthatha ipropathi ngeBelvoir Colchester, siya kufuna ukuthatha ikopi yakho incwadana yokundwendwela yelungelo lakho lokuHlawula irente kunye nobungqina obukhoyo kwidilesi edweliswe kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo. Oku kufuneka kube yimali esetyenziswayo, ingxelo yebhanki okanye iphepha-mvume lokuqhuba ukuba le nto iyadibana nedilesi yakho yangoku. Ilayisensi yakho yokuqhuba ayinakuba bubungqina bedilesi yakho kunye ne-id. Yiza nale nto ekubonweni kwakho, njengoko siza kufuna ukungqina amaxwebhu. Oku kuyakusindisa xa kufuneka ungene e-ofisini uzokwenza le nto. Uya kucelwa ukuba uhlawule imali ebekiweyo yokuqeshisa ngeveki enye nge- $ 150 ukuze ipropathi ithengwe. Iireferensi ezigcweleyo kunye nokutshekishwa kwetyala nge-Open Banking kuyakwenziwa kwaye ukuba ulwazi olungeyonyani okanye olulahlekisayo lunikiwe ukuba isiphumo sokungakwazi ukukunikezela ngokuqeshisa kwipropathi yonke ukhuseleko olugcinwe luza kuhlawula iindleko ezenziweyo. Imali yokubambisa iya kusetyenziselwa idipozithi yomonakalo werente kwiiveki ezi-5. Siza kukucela ukuba usayine isivumelwano sokunika ilungelo lokuhlala ngomhla ekuvunyelwene ngawo usekwe ekujongeni kunye nokuba ibhondi yokhuseleko ingasetyenziselwa ukubekeka kumonakalo.Ngomhla wokuqala wokulawula ukuhlawula irhafu yenyanga enye nge- $ 650 plus idipozithi nge- £ 750 exabisa i- $ 1400 ihlawulwa kancinci kwi-bond ye- $ 150 elingana ne- $ 1250 yexabiso lokuhlawula. Idiphozithi ibanjwa kunye neDepho yoKhuseleko lweDipozithi.Belvoir Colchester lilungu le-Ombudsman yePropati kwaye uneKhuselo leMali kuMthengi ngokuSetyenziswa ngokukhuselekileyo.
, Co7 0ds
Izikolo ezikufutshane Co7 0ds